LALANA MIHOTSAKA ANY AMIN’NY RN 7 : Haharitra iray volana ny asa fanamboarana
Tato ho ato dia tsapa ho nanao be fiavy ny rotsak’orana teto Madagasikara. Teo ny fisian’ilay rivodoza “Dumazile” izay nananontanona an’i Madagasikara, fa eo ihany koa ny mbola maha fotoam-pahavaratra ny vanim-potoana ankehitriny ka mahabe ny rotsak’orana. 7 mars 2018
Na ilaina aza anefa izany rotsak’orana izany dia miteraka voka-dratsy maro ihany koa. Araka ny fantatra mantsy izao dia lalana iray ao Vatoavo, ao amin’ny lalam-pirenena fahafito mampitohy an’Ambalavao sy Fianarantsoa renivohitra iny no nahitana fihotsahana. Araka ny fantatra dia azo heverina ho mbola vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Ava farany teo no nahatonga izao. Araka izany àry dia elanelana eo amin’ny 1m 35 no hita amin’izany fihotsahana izany.
Efa nisy ny fidinana ifotony nataon’ny ministeran’ny Asa vaventy tany an-toerana nijery ny zava-nisy. Izy ireo izay nitatitra fa efa manomboka ny asa fanarenana ka laharam-pahamehana amin’izany ny fanaovana fivilian-dalana na “Déviation” mba hahafahan’ny fiara mifamezivezy ka tsy hiteraka fahatapahana na fitohanana. Raha ny fanazavana hatrany dia eo amin’ny iray volana eo no hanatanterahana ny asa. Miankina amin’izay mety ho mbola fivadibadihan’ny toetr’andro izany ihany koa anefa no mety hahavitan’izany na tsia.
Na izany aza anefa dia misy ny fanaraha-maso akaiky ny amin’izay mety ho mbola fihotsahana mba tsy hitera-doza, araka ny fanazavana hatrany. Efa hisy rahateo ihany koa ny fanadihadiana hatao mahakasika ny fikisahan’ity lalana ity, raha ny fanazavana hatrany. Rehefa fotoam-pahavaratra toy izao matetika malama ny lalana, ary mitranga ny resaka fihotsahan’ny tany ka aleo malina sy mailo hatrany, indrindra ireo mpampiasa ny lalam-pirenena.
Notsindromin’ilay tovolahy antsy ny sipany HASAROTAM-PIARO TAFAHOATRA (500) 19 avril 2018 Maty tanteraka ny demokrasia, manjaka ny ramatahora FANDAVANA NY HETSIK’IREO SOLOMBAVAMBAHOAKA (357) 19 avril 2018 Mikoropaka, miantso fifanatonana PRAIMINISITRA MAHAFALY SOLONANDRASANA (344) 23 avril 2018 Tsy hihemotra ireo depiote, andrasana izay hiseho NA MISY AZA NY RAMATAHORA… (336) 21 avril 2018 Niafara tamin’ny rà nandriaka, tafakatra enina ny isan’ny olona maty TATITR’IREO SOLOMBAVAMBAHOAKA (332) 23 avril 2018 Olona dimy maty, karohina i Romule SAKOROKA TAO MANANARA-AVARATRA (180) 23 avril 2018